Elena Ferrante को पुस्तकहरु: एक सुपर बिक्री छद्म नाम | समाचार साहित्य
Elena Ferrante को किताबहरु
जुआन अर्टिज | 28/12/2021 18:04 | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
नेपल्स को सडकहरु
एलेना फेरान्टे एक इटालियन लेखिकाको उपनाम हो जसले लगभग दुई दशकदेखि विश्व साहित्यिक दृश्यलाई चकित पारेकी छिन्। ९० को दशकमा आफ्नो साहित्यिक काम सुरु गरे पनि, उनको करियर २०१२ मा प्रकाशन पछि कैद भयो। महान मित्र, उपन्यास जसको साथ टेट्रालोजी सुरु भयो दुई साथीहरू। 2018 मा, गाथाको सफलता पछि, HBO ले यसलाई पहिलो पुस्तकको नामको साथ टिभीको लागि रूपान्तरण गर्‍यो र अहिलेसम्म2सिजनहरू प्रसारण भइसकेका छन्।
साहित्यिक वातावरणमा लगभग 20 वर्षको साथ, लेखकसँग नौ उपन्यास, एक बाल कथा र एक निबन्धको सूची छ। उनको अज्ञातताले उनलाई इटाली र बाँकी संसारमा असंख्य पाठकहरूलाई जित्नबाट रोकेको छैन। उनको पछिल्लो उपन्यास, वयस्कहरूको झूट जीवन (2020), द्वारा सूचीबद्ध गरिएको थियो समय वर्षको उत्कृष्ट १०० पुस्तकहरू मध्ये एकको रूपमा।
1 Elena Ferrante को किताबहरु
1.1 L'amore कष्टप्रद (1992)
1.2 डार्क फिग्लिया (2006)
1.3 ल एमिका जेनिएल (२०११)
1.4 स्टोरिया डेला बाम्बिना परडुटा (२०१४)
1.5 ला भिटा बुगियार्डा देगली एडल्टी (२०१९)
2 लेखकको बारेमा, एलेना फेरेन्टे
2.1 अनिता राजा, एलेना फेरान्टे पछि "लेखक"
ल 'अमोर निराश (1992)
यो इटालियन लेखक द्वारा पहिलो पुस्तक हो, जुन उनले आफ्नी आमालाई समर्पित गरे। यो नाम संग स्पेन मा प्रकाशित भएको थियो कष्टकर प्रेम (1996), Juana Bignozzi द्वारा अनुवादित। यो XNUMX औं शताब्दीको मध्यमा नेपल्समा सेट गरिएको उपन्यास हो, 26 अध्यायहरू छन् र पहिलो व्यक्तिमा वर्णन गरिएको छ। यसका पानाहरूमा आमा र छोरीको सम्बन्ध जोडिएको छ - अमालिया र डेलिया -.
जेठ २३ गते समुन्द्रमा तैरिरहेको अवस्थामा शव फेला परेपछि शव अमालियाको भएको पुष्टि भएको थियो । डरलाग्दो खबर डेलियाको कानमा उनको जन्मदिनमा पुग्छ। उसको आमाको मृत्यु भयो भन्ने कुरा उसले त्यो दिन मात्र थाहा पाउने आशा गरेको थियो।
घटना पछि, डेलियाले घटनाको अनुसन्धान गर्न आफ्नो जन्मस्थान नेपल्स फर्कने निर्णय गर्छिन्अमालियाले ब्रा मात्र लगाएको देखेर उनी छक्क परिन् । शहरमा आइपुगेपछि, उसलाई विगतको सामना गर्न सजिलो छैन जुन उसले बेवास्ता गर्न धेरै प्रयास गर्यो, त्यो जटिल बाल्यकाललाई उसले आफ्नो दिमागमा रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
जब उसले पापी वरपरका रहस्यहरू खोल्छ, तिनीहरूले बनाएका सत्यहरू प्रकाशमा आउँछन् आफ्नो वातावरण, आफ्नो जीवन र आफ्नो व्यक्तित्व, कच्चापन जसले तपाईंलाई नयाँ वास्तविकता देखाउनेछ।
अँध्यारो छोरी (2006)
यो साक्षरताको तेस्रो उपन्यास हो। यो Celia Filipetto द्वारा अनुवाद गरिएको थियो र शीर्षक संग स्पेनिश मा प्रकाशित भएको थियो कालो छोरी (2011). यो पहिलो व्यक्तिमा भनिएको कथा हो यसको नायक, लेडा, र द्वारा जसको मुख्य विषय मातृत्व हो। कथानक नेपल्समा सेट गरिएको छ र 25 छोटो अध्यायहरूमा प्रकट हुन्छ।
Leda लगभग 50 वर्षकी महिला, सम्बन्ध विच्छेद र दुई छोरीहरु संग: बियान्का र मार्टा। उनी फ्लोरेन्समा बस्छिन्, र आफ्ना केटीहरूको हेरचाह गर्नुको अलावा, उनी अंग्रेजी साहित्य शिक्षकको रूपमा काम गर्छिन्। तपाईको दिनचर्या अचानक परिवर्तन हुन्छ जब उनका सन्तानले बुबासँग क्यानडा जाने निर्णय गरे.
Elena Ferrante द्वारा वाक्यांश
महिलाउदासीन महसुस गर्नु भन्दा टाढा, उनी आफैलाई देख्छिन् free आफूले चाहेको काम गर्न, त्यसैले आफ्नो जन्मस्थान नेपल्समा छुट्टीमा जान्छ.
समुद्र तटमा आराम गर्दा धेरै स्थानीय परिवारहरु संग साझा, पुनर्जीवित गर्नुहोस्नजानेर, उसको विगत. त्यो तत्काल मा, उनको सम्झनामा आइपुगेको अज्ञात द्वारा आक्रमण, एक जटिल र जोखिमपूर्ण निर्णय लिनुहोस्.
राम्रो साथी (2011)
यो गाथाको प्रारम्भिक उपन्यास हो दुई साथी। यसको इटालियन संस्करण 2011 मा प्रकाशित भएको थियो। एक वर्ष पछि यसलाई सेलिया फिलिपेटो द्वारा स्पेनिश मा अनुवाद गरियो र नाम अन्तर्गत प्रस्तुत गरियो: महान मित्र (2012)। कथानक पहिलो व्यक्तिमा वर्णन गरिएको छ र पछिल्लो शताब्दीमा नेपल्समा हुन्छ। यस अवसरमा, मित्रता कथाको आधार हो, र यसमा दुई युवा व्यक्तिहरू मुख्य पात्रको रूपमा छन्: Lenù र Lila।
लेनु र लिलाले आफ्नो बाल्यकाल र जवानी बिताएका छन् आफ्नो गृहनगर मा, नेपल्स को बाहिरी भाग मा एक अत्यन्त गरीब ठाउँ। केटीहरू सँगै हुर्किए र तिनीहरूको सम्बन्ध त्यो उमेरको सामान्य मित्रता र प्रतिद्वन्द्वी बीचमा परिवर्तन भएको छ। दुबैको आ-आफ्ना सपनाहरू स्पष्ट छन्, तिनीहरू आफैंलाई जित्न र त्यो अँध्यारो ठाउँबाट बाहिर निस्कन विश्वस्त छन्। आफ्नो महत्वाकांक्षा हासिल गर्न, शिक्षा कुञ्जी हुनेछ।
अद्भुत साथी (दुई...
परदुता बाम्बिनाको कथा (2014)
हराएकी केटी (2014) -स्पेनिशमा शीर्षक - टेट्रालोजी समाप्त गर्ने काम हो दुई साथी। कथा २१ औं शताब्दीमा नेपल्समा लिन्छ र लेनु र लिलालाई तिनीहरूको वयस्कतामा देखाउँछ। दुबैले फरक-फरक दिशाहरू लिएका छन्, जसले गर्दा उनीहरू आफैंमा टाढा भएका छन्, तर Lenù को नयाँ कथाले तिनीहरूलाई फेरि एकताबद्ध गर्नेछ। कथा यी दुई महिलाको वर्तमान दिनबाट यात्रा गर्दछ र तिनीहरूको जीवनको पूर्वपरीक्षण गर्दछ।
Lenù एक प्रसिद्ध लेखक बने, फ्लोरेन्समा सरे, विवाह गरे र बच्चाहरू जन्माए। तर, उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्यो । उनको भागको लागि, लीलाको नियति फरक थियो, उनले आफ्नो गाउँ छोड्न प्रबन्ध गरिनन् र उनी अझै पनि त्यहाँ विद्यमान असमानताहरू विरुद्ध संघर्ष गरिरहेकी छिन्। Lenù ले एउटा नयाँ पुस्तक सुरु गर्ने निर्णय गर्छ र विषयले उनलाई नेपल्स फर्काइदिन्छ, जसले उनलाई आफ्नो साथीलाई फेरि भेट्न अनुमति दिनेछ।.
हराएको केटी (दुई...
गाथा को सफलता पछि दुई साथीहरू, Elena Ferrante प्रस्तुत वयस्कहरूको झूट जीवन (2020). यो एक कथा हो जसमा जियोभाना नायकको रूपमा छ र त्यो 90 को दशकमा नेपल्समा हुन्छ।। यस उपन्यासमा फेरान्टेको व्यक्तिगत विशेषताहरू छन्, जसले सामूहिक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए: "बालपनमा म धेरै झूटो थिएँ। 14 वर्षको उमेरमा, धेरै अपमान पछि, मैले ठूलो हुने निर्णय गरें।
जियोभाना १२ वर्षकी केटी हुन् que नेपोलिटन पुँजीपति वर्गसँग सम्बन्धित छ। एक दिन उसले आफ्नो बुबाबाट सुने - उसलाई थाहा नदिई - कि उनी एक कुरूप केटी थिइन्, उनको काकी भिटोरिया जस्तै। आफूले सुनेको कुराले चासो र भ्रममा परेकी, उनले वयस्कहरू कसरी कपटी र झूटा हुन्छन् भनेर देख्न सक्षम भइन्।। जिज्ञासाले आक्रमण गरी, उनले यस महिलालाई खोज्ने निर्णय गरे, आफ्नो बुबाले के भन्नु भएको थियो भनेर पहिलो हात हेर्नको लागि।
को झूट जीवन
लेखकको बारेमा, एलेना फेरेन्टे
उनको गुमनामीको कारण, इटालियन लेखकको बारेमा केहि जीवनी विवरणहरू ज्ञात छन्। धेरैले भने कि उहाँ 1946 मा नेपल्समा जन्मनुभएको थियो र उहाँ हाल टुरिनमा बस्नुहुन्छ। उनको करियरमा, उनी इमेल मार्फत दिएका केही अन्तर्वार्ताबाट मात्र चिनिन्छिन्।
अनिता राजा, एलेना फेरान्टे पछि "लेखक"
र 2016, अनिता राजा नामकी एक महिलाले ट्विटर प्रोफाइल मार्फत "पुष्टी" गरे कि छद्म नामको पछाडिको व्यक्ति उनी थिइन्।। धेरै सन्देशहरू मार्फत, यो व्यक्तिले "लेखक" भएको स्वीकार गरे र आफ्नो गोपनीयतालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे, त्यसपछि खाता मेटाइयो। जे होस्, केही समय पछि Tommaso Debenedetti - दुखको कुरा सेलिब्रेटीहरु संग नक्कली अन्तर्वार्ता फैलाउन को लागी परिचित - Tweets दावी गर्यो, यसरी थप शंका पैदा।
देबेनेडेट्टीले आश्वस्त पारिन् कि उनले राजालाई भेटेका थिए, र उनले उनलाई जानकारी दिए। लेखकको संदिग्ध प्रक्षेपणको बावजुद - आफूलाई "झूटको इटालियन च्याम्पियन" भनिन्छ - केही पत्रकारहरूले सिद्धान्तलाई पुष्टि गरे। यसका लागि, उनीहरूले प्रतिलिपि अधिकारको पैसा कहाँ जम्मा गरिएको थियो भनेर सोधे र अनिता राजाको खातामा जम्मा गरियो, जसले यो उहाँकै हो भनेर पुष्टि गर्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » Elena Ferrante को किताबहरु
क्रिस्टिना रोसेटी। उनको मृत्युको वार्षिकोत्सव। कविताहरू
मेरो वर्षको पुस्तकहरूको चयन। एक समीक्षा